ARCHIVE, MARKET WATCH, SHARE MARKET, SPECIAL » लगानीकर्ताले बुझ्नैपर्ने नेपाली पूँजीवजारको रोचक पक्ष ' वालुवा निचोरेर तेल आउँदैन '
एक दिन मेरो सानीमा बैंकमा पूरानो साथीसँग भेट भयो । एक प्रसंगमा मैले भनें, 'हेर , म पनि यो बैंकको मालिक हुँ नि, यार !' उसले मेरो कुरो भुईमा खस्न नपाउंदै भन्यो, 'गफ नदेन यार ! बोल्दा बोल्दै बढी नै वोल्न थालिस ! तँ कसरी यत्रो ठूलो वैकको मालिक भइस् ? 'मैले यो बैंकको सेयर किनेको छु नि !' मैले उत्तर फर्काएँ ।
साधारण सेयरमा लगाइने पैसा यस्तो लगानी हो जुन एक कित्ता मात्रै किनेपनि उक्त कम्पनीको मालिक भईन्छ । साधारण सेयरमा लगानी गर्ने प्रत्येक व्यक्ति उक्त कम्पनीको मालिक हुन्छन् । प्रत्येकलाई उक्त कम्पनी मेरो हो भन्ने अधिकार हुन्छ । यसैले सानो लगानीलेपनि ठूला कम्पनीको मालिक बन्ने अवसर पाइन्छ । अनि त भन्ने गरिन्छ 'सेयर भनेको कागजको टुक्रा मात्र होईन, यसले व्यवसायको स्वामित्वको एउटा अंसलाई प्रतिनिधित्व गर्छ ।'
यसैकारण सुरुमा लगानी गर्दै यस कम्पनीले गर्ने व्यवसायको सम्भावित मालिकका रुपमा आफुलाई सोच्नुपर्छ । सेयरमा गरिने लगानी यस्तो लगानी हो , जहाँ अर्बपतिहरुसँग सहयात्री भएर हिड्न पाईन्छ । सेयर बजारमा धेरैको सोख र चाहना राम्रा कम्पनीको मालिक वन्ने हुन्छ र यो असम्भव देख्नेहरुका बीचमा सम्भव भएर उपस्थित हुने माध्यमपनि हो ।
मैले यसो भन्दैगर्दा बीचमा असाधारण किसिमले मूल्य उचालिएका कम्पनीको सेयर किनेर नाफा लिन सकिदैन । वजारमा एक किसिमको हल्ला फैलायर कमजोर कम्पनीलाई धेरै वलियो कम्पनी हो भनी मूल्य आकासमा पुर्याई आफु बाहिरिने र सोझा तथा नयाँ लगानीकर्ता लाई फसाउने खेलपनि हुन्छ । त्यसैले त मैले बारम्बार यसै अनलाईन अर्थ सरोकार डटकमबाट भन्ने गरेको छु की पूँजी वजारमा 'पारीवाट भुक्ने र चौवाटोमा फुक्ने' सँग संग सचेत हौं है भनेर ।
नेपाली सेयर बजारमा कस्ता कम्पनीपनि छन्छ भने एक महिना पहिला ३ सय को हाराहारीमा किनवेच भइरहेका कम्पनी आज उक्त कम्पनीको मूल्य झण्डै पाँचसयको हाराहारीमा छ । यो कम्पनी किन यसरी एकाएक शिखरमा पुर्याईदै छ ? सचेत लगानीकर्ताले योपनि वुझ्न जरुरी हुन्छ की यसको प्रतिसेयर आम्दानी कति छ ! विगतमा यस्ले कुन किसिमले वोनस दिदै आएको छ ! रिजर्भ कोष कस्तो छ ! संचालक हरुको पृष्टभूमि कस्तो हो, आदि कुरा हेर्नु जरुरी हुन्छ ।
सधै बजारमा किनवेच भइराखेका असाधारण किसिमले मूल्य नउचालिएका विगत तिन चार महिना देखिनै आफ्नो गतिमा हिडिराखेका र निकट भविश्यमानै ठूलै संख्यामा वोनस तथा राईट दिने कम्पनीमा आँखा लगाउँ । आवश्यक्ता आनुसार बुझ्नेसँग सोधखोज गरौं । सल्लाह धेरैसँग लिउँ, निर्णय आफै गरौं । यसो गर्दा आत्मसन्तुष्टि मिल्छ ।
हामी यस्तो संम्वेदनशील क्षेत्रमा लगानी गर्दैछौ भने कसैको वहकाउमा र लहैलहैमा लागेर सेयर खरिद गर्ने चेष्टा नगरौं । सुजवुझका साथ सेयरमा लगानी गरौ । सेयरको लगानीले भविश्यमा बसीबसी खाने आधार तय गर्न सक्छ । त्येसैले त मैले वारम्वार भन्दै आईरहेको छु की खराव कम्पनीको सेयर खरिद गरेर प्रतिफल लिन खोज्नु र वालुवालाई निचोरेर तेल निकाल्न खोज्नु उस्तै कुरा हो । आजैवाट सचेत बनी सेयर वजारमा लगानी वढाऔं । आजैवाट सुनौलो भविष्य कोर्न सुरु गरौं ।
प्रकाशित मिति : Sunday, May 7, 2017